Ujonga njani inqanaba lebhetri yomoya kwiifowuni ze-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungayijonga njani inqanaba lebhetri ye-AirPods Pro kwiifowuni ze-Android
Ungayijonga njani inqanaba lebhetri ye-AirPods Pro kwiifowuni ze-Android
Ngaba uyazi ukuba ungasebenzisa ii-Apple & aposs ze-AirPods kunye ne-AirPods Pro kungekuphela nje nge-iPhone, kodwa kunye neefowuni ezininzi ze-Android? Unako, kwaye nantsi iiapos zendlela yokujonga ibhetri yee-AirPods kwi-Android.
Ukudibanisa, vula nje ityala le-AirPods kwaye ubambe iqhosha ngasemva kude kube ukukhanya ngaphambili kuqhwanyaza, emva koko kuya kufuneka bavele kwimenyu yeBluetooth kwifowuni yakho ye-Android. Cofa isibini kwaye nonke nisetiwe.
Ujonga njani ibhetri yeeAirPod kwi-android?
Kodwa njengokuba uqala ukusebenzisa ii-AirPods kwi-Android uyakuqaphela into enye engekhoyo: ulwazi malunga nokuba ushiye ibhetri engakanani.
Ngethamsanqa, kukho usetyenziso olukuxelela konke malunga nayo kwaye iapos simahla ngokupheleleyo. Igama leapps yiAirBattery kwaye unokuzikhuphelela kwifowuni yakho kwikhonkco elingezantsi:
Khuphela iAirBattery kwiVidiyo kaGoogle
I-AirBattery iya kukuxelela intlawulo ye-AirPod nganye kunye ne-AirPods yokutshaja ngefestile pop-up ebonakala imizuzwana embalwa emva kokuba uvule isiciko kwityala le-AirPods. Inqanaba lokuhlawuliswa alichanekanga kwaye endaweni yoko liya kubonisa ngokunyuka nge-10% (95%, 85%, 75%, njl.
Sincoma ukuba ungene kwi-app kwaye uthenge uguqulelo lwe-Pro nge-1 yeedola, ukuze ulahle ii -apps, kwaye ufumana ukhetho lokubona inqanaba lebhetri ye-AirPod kanye kumthunzi wesaziso olunge kakhulu.
eyona fowuni ilungele abasebenzisi bamandla
Ezona zilungileyo (zihlawulelwayo simahla) zokulandela umkhondo iinkqubo zokulala zeApple Watch
I-5 yezona zilungileyo zezilwanyana zezilwanyana eziza kukhangela i-Tamagotchi itch
Uhlelo lokusebenza lwe-YouTube ngoku lunokudlala iividiyo ezingama-4K ze-HDR kwizixhobo ze-Android
I-Samsung Galaxy S8 + vs S7 Edge
Ibango le-Galaxy S7 Edge ibhengezwa ngamaxabiso kunye nemixholo yebhokisi
IMotorola Moto Z3 Dlala ayinayo i-headphone ye-3.5mm, kodwa iza neadaptha
Itshaja ye-Apple iPhone 12 MagSafe ibona isaphulelo esinqabileyo eAmazon
I-Samsung Galaxy Qaphela i-9 kunye ne-Gear VR yangoku ayisebenzi kunye, kodwa kukho ii-apos zisebenza
I-Facebook kunye ne-Messenger: indlela yokuvula amakhonkco kwisikhangeli sangaphandle
Ukusasazwa bukhoma kukaGoogle I / O: Ungawubukela njani umcimbi we-Android 12 kunye ne-Wear OS